Bahrain: Kaonty Mampivarahontsana Avy Amin’Ireo Nanatri-Maso ny ‘Vono olona’ Tao Pearl · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2011 16:04 GMT
Ity lahatsoratra ity dia iray amin'ireo tatitra manokana ataonay momba ny Hetsi-panoherana Bahrain 2011.
Mitohy mipoitra ireo fitantaràna mampihoron-koditra momba ilay fanafihana niharo halozàna talohan'ny andro miposaka tao amin'ny renivohitra Barhaini, ahitàna ireo mpanao fihetsiketsehana naparitaky ny mpitandro filaminana avy tao amin'ny rond-point Pearl, toerana nofinidin-dry zareo hitobiana mba hanindriana ny fitakiany, raha samy mbola miezaka hanakatra ny tena nahazo azy ireo ny vahoaka Barhaini sy izao tontolo izao.
Indreto fanehoan-kevitra vitsivitsy avy tao amin'ny Twitter faramparany avy any Barhain:
@emoodz: Afotitry ny fitondrana amin'ny vahoakany ihany ny tafiny, mba henon'izao tontolo izao ve ny tomaninay? #bahrain #feb14 #lulu
@aalman81: Isika rehetra dia.. “@ehsankooheji: Mitomany aho…”
@BaghdadBrian: Vono olona eto #Bahrain ary feno miaramila ny tanàna, 5 no lavo tsy misy fiara mpamonjy voina, vonjeo, vonjeo, feo antso vonjy: http://bit.ly/fe0LrE. #feb14
@awa9999: Mpitondra vonjy voina voalohany voadaroka raha nanao ny fandraisana an-tànana voalohany tamin'ity maraina ity http://yfrog.com/hsq1aylj #bahrain #feb14
@maryamalkhawaja: Mpitsabo mpanampy: ” nanangona ireo naratra noho ny daroka nataon'ny polisy mpandrava korontana azy ireo izahay, ireo polisy izay niteny fa baiko no tanterahan-dry zareo” #bahrain #feb14
@NickKristof: fiara mpamonjy voina 10 teo ho eo, an'ny mpitsabo mpanampy no notafihan'ny polisy tao #Bahrain. Nitafatafa tamin'izy ireo aho, nahita ny ratrany.
@NickKristof: #Bahrain mpamily fiara mpamonjy voina iray no nilaza tamiko fa manampahefana iray ao amin'ny tafika #Saudi no nanambana azy basy teo amin'ny lohany, niteny fa hotifiriny izy raha manampy ireo naratra.
@Dr_Murtadha: Antso maika ho an'ireo vahoaka tia tanindrazana sy .. miangavy mandehana manome rà any amin'ny toby fanangonana rà #Bahrain #feb14 #lulu
@Nabeelrajab: sary vitsivitsy momba ny androany azonao jerena http://goo.gl/9o1CX #feb14 #bahrain
@yslaise: Ho solon'ny ozona.. dia tokony hivavaka ianao ho an'ireo namoy aina & manomeza rà ho an'ireo naratra #14Feb #Bahrain
@aalman81: Hiandry ny lahatsary misy ny antsipirihany kokoa mikasika ny zava-nitranga androany izahay mba hahafahana manome ny fomba fitsara amin'ny maha mpanao gazety sy mpanadihady. #Bahrain
@saralicious: Reveko be ilay fihetsiky ny TV ao Bahrain tsy mamoaka na inona na inona momba ny zava-misy ao amin'ny firenena. #Bahrain #Feb14
حقاً انه لأمر عجيب اشخاص كانوا بالامس انصارا لمصر وتونس واليوم يجرمون افعال اهل البحرين مالكم كيف تحكمون #lulu #bahrain # 14feb #feb14
Dia tena mahazendana ny hoe ireo nanohana an'i Ejipta sy Tonizia omaly dia manenjika mafy ny hetsiky ny vahoaka eto Bahrain izao. Inona no tsy milamina ao aminareo ao e? Ahoana no mba fomba fitsaranareo zavatra?
@EssaEsam: Ny haben'ny fankahalàna hitako dia tena tsy mampino. Nankaiza no nalehan'ireo tena Barhainis e? #Bahrain #Feb14
@HussaKhalid: @ytaima Miangavy anao tazony ho anao ny hevitra sy ny fomba fijery vahiny anananao ho any ivelan'i Barhain. Ho ela velona anie ny Mpanjaka Hamad. #Bahrain #feb14
7 andro izayIsraely